श्रीमानको नि’धन भयो , छोरिहरु पाल्नको लागि टर्कीको ब्यबसाय गरेकी छु – Dainik Samchar
April 10, 2021 487
धेरै पैसा कामाउछु भनि विदेश गएकि रिता अहिले विदेश बाट फर्केर नेपाल मै केहि गर्छु भनि लागेकी छिन्। दाङ कि रिता श्रीमान को मोटरसाइकल दु’र्घट’ना मा परि नि’ध’न भए पछि परिवार को जिम्बेबारी बढे पछि उनि विदेश गएकी हुन्। विदेश मा मेहेनत गरे अनुसार को नतिजा नआए पछि नेपाल मै गएर केहि गर्छु भनि नेपाल आईन।
नेपाल आए पछि ५ बिघा जमिन भाडा मा लिएर अहिले कृषि पेषा मा स’क्रिय भएकी छिन्। आफ्ना दुइ सन्तानको काख मै बसेर केहि गर्छु भनेर नेपाल आएकी रिता ले अहिले धेरै संख्या मा टर्की पालेर बसेकी छिन्। पहिले पाल्दा १०० वटा पालेकी रिता ले अहिले २०० पालेकी छिन्। टर्की बाट राम्रो आम्दानि भएको र रो’ग देखि डराउनु पर्दैन। मैले बच्चा , अन्डा , गरेर धेरै बेचेको छु।
खसी र टर्की को मासु लगभग उस्तै हुन्छ , दुबैको मुल्य पनि एकै पर्छ। मैले टर्की संगै हास पनि पालेको छु , कागती पनि लागाएको छु। सबै जमिन भा’डा मा छ। २० बर्ष को लागि लिएको छु , अब अंगुर पनि रोप्ने सोचमा छु। श्रीमानको दु’र्घट’ना हुदा धेरै ऋ’ण लग्यो त्यसैले मैले आफै गर्न थाले। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेर्नुहोस।
Prevसाह्रै पीडित आमा को यो भिडियो हेरेर सेर गर्दिनु होला
Nextविज्ञान र प्रकृतिलाई नै चुनौती दिने गरी जन्मियो अचम्मको बच्चा
दाँत पहेलो हुने समस्यालाई अब दुई मिनेटमै घरेलु उपाय बाटै चम्किलो बनाउनुहोस् ……
बज्यो खतराको घन्टी ! जे नहुनु थियो त्यही भईदियो
भिडियो बनाउदै गर्दा दुवै युवती पक्राउ ! कारण यस्तो